Cysts ဆစ်စ် - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Ovarian dermoid cyst အပင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာအောက်မှာ ကွန်မင့်တွေလာတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာထဲမှာ စကားလုံးရင့်သီးတာပါလို့ ဖျက်ပါရစေလို့ တောင်းပန်ပြီး ဖျက်လိုက်တယ်။ ထူးဆန်းတဲ့ရောဂါတိုင်းမှာ အငြင်းပွါးကြတယ်။
Dermoid Cyst ဒါးမွိုက်ဆစ်စ်အောက်မှာတွေ့ပါမယ်။ နေရာနဲ့ အရွယ်အစားသာကွာပါတယ်။ အလုံးအကျိတ် ခေါ်ကြတာတွေက လူကိုယ်မှာ နေရာမရွေး၊ ကျား-မ မရွေး၊ အရွယ်မရွေး ဖြစ်ကြတယ်။ အလုံး-အကျိတ် မှန်သမျှကို အခြေခံအားဖြင့် ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်တာဆိုပြီး ၂ မျိုးခွဲပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံးက Cysts ဆစ်စ်ဖြစ်တယ်။ အဖုံးပါတဲ့အိတ်ကလေးမျိုး ဖြစ်တယ်။ အထဲမှာ အရည်လိုဟာ အဖတ်လိုဟာ တမျိုးမျိုးရှိတယ်။ လူ့ကိုယ်မှာ နေရာမရွေး၊ လူမရွေး၊ အရွယ်မရွေး သိပ်ဖြစ်ကြတယ်။ အရွယ်အစားလည်း အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။
ဆစ်စ်ဘာလို့ ဖြစ်ရသလဲ။ အသုံးများလို့သဘော၊ ဇရာသဘောကနေဖြစ်တယ်။ ရောဂါပိုးဝင်လို့၊ မျိုးဗီဇ ချို့ယွင်းလို့ကနေဖြစ်တာ၊ မွေးရာပါဖြစ်တာ။ အရေပြားနဲ့ကပ်နေရင် စဖြစ်ကတည်းက သိသာမယ်။ ရင်သားထဲမှာ စမ်းလို့ရအောင်ကြီးလာမှ သိတတ်တယ်။ အသည်းလို၊ ကျောက်ကပ်လို အင်္ဂါတွေမှာဖြစ်နေရင် ဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ မခံစားရမချင်း သိသေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ X-ray, Ultrasound, CAT scan, MRI တွေ ရိုက်ရင်းမှ သိလာတာမျိုးလဲရှိတယ်။
အမျိုးအစား များသလားမမေးနဲ့ ရာကျော်နိုင်တယ်။ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အမျိုးအစားထဲက ရေးပြီးသားတွေကို အက္ခရာစဉ်လိုက်ရေးပါမယ်။ အနည်းအများလိုက်မဟုတ်ပါ။
4. Bartholin's cyst ဗဂျိုင်းနား (ဘာသိုလင်-ဆစ်စ်)၊
5. Breast lump (ကင်ဆာ) မဟုတ်တဲ့ ရင်သား-အကျိတ်
6. Corn ငါးမျက်စိ၊
7. Cysts in the breast (Fibrocystic disease) ရင်သား၊
8. Cysts of the glands within the eyelid (Chalazions) မျက်စိအတွင်းစွန်၊
9. Epidermal cysts of the skin (Epidermal inclusion cysts) အရေပြား၊
10. Ganglion cysts အဆစ်နေရာ၊
11. Giant-cell tumor of the bone (GCTOB) ကင်ဆာနဲ့တူတဲ့ အရိုး (ကျူးမား)၊
12. Lumps or Bumps အလုံး-အကျိတ်၊
13. Lymphangiomas (လင်ဖန်ဂျီယိုးမား) လည်ပင်း အကျိတ် တမျိုး၊
14. Myoma (Fibroid) သားအိမ်အလုံး၊
15. Nasal Polyps နှာခေါင်းထဲ အသားပိုဖြစ်ခြင်း၊
16. Neck Glands လည်ပင်း အကျိတ်၊
17. Neurofibromatosis ကော်ဖီရောင် အသားပိုလေးတွေ၊
18. Ovarian cysts မျိုးဥအိမ်၊
19. Ovarian dermoid cysts မျိုးဥအိမ်၊
20. Pancreatic cysts သရက်ရွက်၊
21. Pineal cysts (Pineal gland of the brain) ဦးနှောက်၊
22. Polycystic kidney disease ကျောက်ကပ်၊
23. Sebaceous cysts အရေပြား၊
24. Tarlov cysts (Meningeal or Perineural cysts) ဦးနှောက်မြှေး၊
25. Thyroid cysts (သိုင်းရွိုက်) လည်ပင်းကြီး၊
26. Vaginal Cysts, Polyps, Warts ဗဂျိုင်းနားမှာ အပိုအဆာတွေ ဖြစ်တာ။
တွဲတင်ထားတဲ့ အလုံးလေးတွေထဲမှာ အမွှေးလေးတွေပါတယ်။ အပင်းလို့ခေါ်ချင်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးမျိုးဥအိမ်မှာဖြစ်တာနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဗိုက်နဲ့ခေါင်း၊ သေးတာနဲ့ကြီးတာသာကွာတယ်။